Coramine Glucose (ကိုရာမင်း ဂလူကို့စ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Coramine Glucose (ကိုရာမင်း ဂလူကို့စ်)
Coramine Glucose (ကိုရာမင်း ဂလူကို့စ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Coramine Glucose (ကိုရာမင်း ဂလူကို့စ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Coramine Glucose (ကိုရာမင်း ဂလူကို့စ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကြောင့် သတိလစ်လဲကျခြင်းကို ကာကွယ်ရန်။
မောပန်းနွမ်းနယ်အားအင်ကုန်ခမ်းခြင်း (အထူးသဖြင့် အလွန်မြင့်မားသော နေရာတွင် ရောက်ရှိနေသောကြောင့်) တို့ကို သက်သာပျောက်ကင်းစေရန် အတွက် Coramine Glucose® ကို အများဆုံးအသုံးပြုကြပါသည်။
Coramine Glucose (ကိုရာမင်း ဂလူကို့စ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်မှ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သုံးစွဲပါ။
Coramine Glucose (ကိုရာမင်း ဂလူကို့စ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Coramine Glucose® ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Coramine Glucose® ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Coramine Glucose® ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက်ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Coramine Glucose® ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Coramine Glucose® ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက်ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Coramine Glucose (ကိုရာမင်း ဂလူကို့စ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါအခြေအနေများတွင် ဤဆေးကို မသုံးစွဲရပါ။
အသက် ၁၅နှစ်အောက် ကလေးများတွင်။
ဤဆေးကို သုံးစွဲထားလျှင် အားကစားသမားများ ဆေးကျနိုင်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Coramine Glucose (ကိုရာမင်း ဂလူကို့စ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Coramine Glucose (ကိုရာမင်း ဂလူကို့စ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆေးလွန်သည့်အခြေအနေမျိုးမှသာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရနိုင်ပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Coramine Glucose (ကိုရာမင်း ဂလူကို့စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Coramine Glucose® ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
ဤဆေးနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သော ဆေးဝါးများမှာ
 Para-amino salicylic acid
 Opiniazide တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Coramine Glucose (ကိုရာမင်း ဂလူကို့စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Coramine Glucose® က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Coramine Glucose (ကိုရာမင်း ဂလူကို့စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Coramine Glucose® ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အဆိုပါ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများမှာ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Coramine Glucose (ကိုရာမင်း ဂလူကို့စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏ : တခါသောက်လျှင် ဆေးပြား
တပြား သို့မဟုတ် နှစ်ပြားနှုန်းဖြင့် တနေ့လျှင် နှစ်ကြိမ်မှ သုံးကြိမ်အထိ သောက်နိုင်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Coramine Glucose (ကိုရာမင်း ဂလူကို့စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက်ငါးနှစ်နှင့် အထက် ကလေးများအတွက် : ငုံဆေးပြား တပြား သို့မဟုတ် နှစ်ပြားနှုန်းဖြင့် တနေ့လျှင် နှစ်ကြိမ်မှ သုံးကြိမ်အထိ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
Coramine Glucose (ကိုရာမင်း ဂလူကို့စ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Coramine Glucose® ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သောက်ဆေးပြား၊ဝါးစားနိုင်သော ဆေးပြား၊Dextrose Monohydrate 1.5 g; Nikethamide 125 mg
PasteTextHere Coramine Glucose® ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
CORAMINE GLUCOSE® : CORAMINE GLUCOSE® (DEXTROSE MONOHYDRATE,
http://www.Coramine Glucose® e.com/?c=drug&s=coramine%20glucose&ingredient=dextr
ose%20monohydrate/nikethamide. Accessed November 19, 2016
MEKO CORAMIN. http://healthca.info/2016/07/23/meko-coramin- nikethamide-
glucose/ Accessed November 19, 2016
CORAMINE GLUCOSE®. http://www.ndrugs.com/?s=coramine%20glucose.